Photogimp wuxuu keenayaa iskuxirka Photoshop-ka GIMP laftiisa | Abuurista khadka tooska ah
PhotoGIMP wuxuu u beddelaa GIMP Photoshop ku dhowaad sixir
Maaha sixir, laakiin waxay leedahay awood beddelid weyn balastarkan loo yaqaan PhotoGIMP taasina waxay siin doontaa baalasha GIMP si khibraddu ugu dhowaato tan Photoshop.
In kasta oo gudaha su'aal interface marwalba noocan ah barnaamijyadu aad ayey isugu egyihiin midba kan kale, haddii mid ula qabsado toobiyeyaashooda iyo daaqadahaas, isagoo balastarkaan gacmaheena ku haysta, ha ahaado Linux, PC iyo MacOS, waa in lagu raaxeystaa.
Haa, shalay waxaan awoodnay inaan ogaano kordhin kuu saamaxaysa inaad tirtirto lacagaha iyadoo qalin lagu garaacayo Photoshop laftiisa, maanta waxaan siineynaa GIMP qallooc taasi waa sida barnaamijkan Adobe.
GIMP waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn, on aragtida xoriyadda, sidaas darteed waxay leedahay kumanaan taageerayaal ah. Maaddaama ay tahay barnaamij aan nidaamka iyo nidaamka ka dalbanaynin, sidaas darteed kombiyuutarada waayeelka ah way ka badan yihiin intii lagu taliyay.
Y. PhotoGIMP kan sixirka sameeya. Waxaa jira bakhaar ku yaal GitHub, oo si sax ah ugu jirta xisaabta Diolinux waana mid muhiim u ah kuwa ka tagaya Photoshop oo doonaya inay si dhakhso leh ugu tagaan GIMP. Gaar ahaan ku dayashada dhaqankooda.
Laga soo bilaabo boggan Nos baro sida loo rakibo feylasha loo baahan yahay in lagu "dhejiyo" GIMP oo u beddelo. Waxyaabaha ugu wanaagsan ee ay ka mid yihiin noocyada, miirayaasha Python, iyo awooddeeda ugu wanaagsan ee ay uga faa'iidaysan karto daaqadda weyn ee GIMP. Soo jeedin xiiso leh oo loogu talagalay kuwa doonaya barnaamij bilaash ah oo aan cunin ilo aad u tiro badan isla markaana leh muuqaal la mid ah isdhexgalka kuwa aad ugu isticmaalay barnaamijka Adobe.
Waqtigaaga ha iska lumin haddii aad isticmaasho GIMP si aad ugu gudubto balastarkaan u baddelaya si sixir ah. U tag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Gimp » PhotoGIMP wuxuu u beddelaa GIMP Photoshop ku dhowaad sixir
Qalabkan 'Remo.bg' wuxuu awood u leeyahay inuu ka saaro asalka sawir Photoshop ah